Root-Restore Images မပါဘဲ Photo Recovery ကိုဖျက်လိုက်သည်။ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Root-Restore ပုံများမရှိပါကဓာတ်ပုံ Recovery ကို Deleted
Root-Restore ပုံများ APK ကိုမရှိရင်ဓာတ်ပုံ Recovery ကို Deleted
အသုံး အမြစ်-Restore ပုံရိပ်တွေမပါဘဲ Deleted ဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူ တစ်ခုအံ့သြဖွယ် ဓာတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူဟာ android app ကို သင့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံ recover နဲ့ restore ရန်။ ကျနော်တို့ rooting မရှိဘဲအားလုံးဖျက်ပစ်ဓါတ်ပုံတွေကိုရဖို့နက်စကင်ကိုအကြံပြုပါသည်။
🔁 အလွယ်တကူပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ် Delete PHOTOS recover Restore အား
ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်မတော်တဆဓါတ်ပုံသင့်ဖုန်းမှယခုအခါသင်သည်ထိုသူတို့နောက်ကျောကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန် tool ကိုသုံးစွဲဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလိုအပ်ရမယ်ပြီလော သငျသညျဤပြဿနာရှိပါကဖြစ်လျှင်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူ app ကိုသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေတာဆယ်တင်ရေးကိရိယာတခုနှင့်အတူ, သငျသညျစက္ကန့်တစ်ဦးအမှု၌လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ဓာတ်ပုံများ recover နဲ့ restore ဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်မိုဘိုင်း root ရန်လိုအပ်ကြောင်းခြင်းမရှိဘဲ, သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုသင့်ရွေးချယ်မှုပျောက်ဓာတ်ပုံများရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်သင့် device ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။
🔎 သင့်ရဲ့ Android device များ၏ Deep Scan
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြန်ဓာတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူ tool ကိုအတူ, သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်မြင်မွငျရသောဓာတ်ပုံများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အပေါင်းတို့, သင့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ဓာတ်ပုံများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်ရဲ့ device တစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောစကင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူ app ကိုသင် SD ကဒ်ကနေအပြင်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ internal memory ကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှဓာတ်ပုံများ recover ပေးနိုင်ပါတယ်။
???? အားလုံးသင့်မှတ်ဥာဏ်ပွနျသငျ့လုံခြုံရေးနှင့် SAFE Tool များ
ဓာတ်ပုံနာလန်ထူဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, သင်တောင်မှသင်၏လူမှုမီဒီယာနှင့် messenger ကို app ရဲ့ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံရယူရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ အဆိုပါဓာတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူ app ကိုအလွန်အမင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဓာတ်ပုံများဒီရိုးရှင်းတဲ့အဟောင်းဓါတ်ပုံ app ကို restore သေးမယုံနိုင်စရာအပေါ်ရုံကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူ, စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်ရဲ့အမှတ်တရများ၏ပြန်လည်၌သင်တို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု tool ကို restore ။
⭐️ အခမဲ့ Image ပွနျ - Return PHOTOS အင်္ဂါရပ်များ
✅ကို Safe နှင့်ပျောက်ဆုံးဓာတ်ပုံများပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန် app တစ်ခုအသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို root လုပ်✅အဘယ်သူမျှမလိုအပ်
✅ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ပုံရိပ်တွေ Recover နှင့် Restore
သင့်ရဲ့ device ကို၏အပြီးအစီးနက်ရှိုင်းသောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့✅
✅သင့်ရဲ့ internal memory နှင့် SD ကဒ်ကနေဓါတ်ပုံတွေကို Restore
✅ Highly လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံဒေတာဆယ်တင်ရေး
✅ရုံတစ်ကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်၏ device ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
✅ download ပြုလုပ်အခမဲ့ဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူ tool ကို
Recover အဟောင်း restore, ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်မတော်တဆပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်ဖုန်းမှဓါတ်ပုံကိုဖျက်လိုက်ပါ။
အခမဲ့ Google Play ပေါ်တွင်ယခု Download!
ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဝှက်ထားသောဖိုလ်ဒါထဲမှာတချို့ရုပ်ပုံများကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, သူတို့သေးဖျက်ပစ်ကြသည်မဟုတ်ရင်တောင်အချို့ကိုသင်ဓါတ်ပုံတွေကိုပြသလိမ့်မည်။ သင်သည် app နှစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပြီးနှင့်ဖျက်ပစ်မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုပြသပါလိမ့်မယ်နောက်ကျောကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်လိုသည့်ဓါတ်ပုံများကိုရှာဖွေနေထားပါ။ ဒီ app ဟာ recycle bin ကိုအဖြစ်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်က app ကို install လုပ်ပြီးခင်ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြကြောင်းဓါတ်ပုံတွေကိုပင်သူမြားရနိုငျပါသညျ။
Root-Restore ပုံများမရှိပါကဓာတ်ပုံ Recovery ကို Deleted
ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထူထောင်ရေး - Ztool